विद्यार्थी भए पनि तलब आएकै छ, नभए पनि आएकै छ, किन टाउको दुखाउने ? | नुवागी
विद्यार्थी भए पनि तलब आएकै छ, नभए पनि आएकै छ, किन टाउको दुखाउने ?
जीवनको आधा हिस्सा शिक्षण क्षेत्रमै बिताएका उद्धव सुजखुको जन्म विक्रम सम्वत २०१५ सालमा भएको हो । उनीसँग शिक्षणका तीता पनि मीठा पनि गरेर थुप्रै अनुभवहरु छन् । उनका अनुभव, अहिलेको शिक्षाको अवस्था, उनले नेतृत्व गरेको शैक्षिक धरोहरहरुका केही विषय समेटेर जेठको २० गते अनिवार्य अवकास पाएका पूर्व शिक्षक एवं प्रअसँग हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानीको सार ।
हालसालै रिटायर्ड हुनुभयो ?
हो, एकदमै अस्ति(जेठ २० गते ) । उमेरहदले ६० वर्ष पुगेको र सरकारी नियम कानून अनुसार शिक्षकहरु साठी वर्षमा अनिवार्य अवकास लिनुपर्ने प्रावधानले रिटायर्ड भएको हुँ ।
अवकासपछिको दिनचर्या वा अबको योजना के छ तपाइँँसँग एक रिटायर्ड शिक्षकको हिसाबले भन्नुपर्दा ?
शैक्षिक क्षेत्रमै सकिने किसिमबाट लाग्छु भन्ने लागेको छ । सञ्चार क्षेत्रमा पहिला पनि काम गरिसकेको हुनाले पत्रपत्रिका हेर्नुपर्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ । त्यसमा पनि सायद् ध्यान दिन्छु होला ।
थकाई लागेको छैन तपाइँलाई ?
अहिले आराम गर्दैछु, एकदुई महिनापछि फेरि कार्यक्षेत्रमा लाग्नेछु । साथसाथै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा पाएको छु । कार्यदलको सदस्य पनि भएको नाताले कक्षा ६ र १ को बनिसकेको छ, बाँकी २, ३, ४ र ५, ७ र ८ को बाँकी नै छ । त्यसमा पनि लाग्नुपर्ने साथीहरुको सुझाव छ । त्यो लागू गर्न पनि सायद् भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ, त्यही योजनामा छु ।
अवकास पाइसकेपछि पनि त आनन्दले बस्नुपर्ने हो नि हैन र ? किन फेरि त्यतातिर जोडिन लाग्नुभयो ?
हुन त शारिरीक रुपमा मान्छेहरु रिटायर्ड भए पनि मानसिक रुपमा रिटायर्ड भएका हुँदैनन् । म जागिरबाट रिटायर्ड भएको हुँला तर कामबाट टायर्ड भएको छैन भन्ने महशुस गर्दछु । किनभने साथीहरु हुनुहुन्छ, रिटायर्ड साथीहरु पनि मैले देखेको छु । उहाँहरुकै साथमा लाग्ने, सामाजिक सोवामा लाग्ने मनसाय बनाएको छु । घरमा बसिराख्दा खेरि आफ्नो जुन अनुभवहरु छन्, काम गरेका अनुभवहरु बिर्सँदै जान्छन् भन्ने कुरा मैले मानसिक डाक्टरहरुबाट थाहा पाएको छु । त्यही भएर जति आनन्दले बस्छ, उसका अनुभवहरु पनि बिर्सँदै जाने रहेछ । त्योबाट बच्न पनि मस्तिष्कलाई चलायमान बनाइराख्नुपर्छ भन्ने सोच छ ।
रिटायर्ड भइसकेपछि कति जागिरे शिक्षकहरु डिप्रेसनको सिकारमा परेका देखिन्छन्, त्यो समस्याबाट छुटकारा पाउने उपाय पनि हो कि तपाइँको योजना ?
बुढ्यौलीले छोएपछि स्मरणमा पनि क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ , यदि हामी चुप लागेर बस्यौं भने, म रिटायर्ड भइहालेँ, किन काम गर्नुपर्यो भनेर बस्यो भने । यसैले दिमागलाई परिचलान गर्दै जानुपर्छ । त्यसले त्यो स्मरणलाई केही कम गर्न भने सहयोग गर्छ । त्यो कारणले पनि स्वयम्सवी भावनाले काम गर्ने योजनामा छु ।
भनेपछि, आफ्नो अनुभव, योग्यता, क्षमतालाई अझ पनि मर्न नदिने सोचमा हुनुहुन्छ ?
अँ, म आफूले सकेको हिसाबले योगदान दिन्छु भन्ने नै हो । मैले त्यस्तै साथीहरु पनि पाएको छु । साथीहरुको हौसला मैले पाएको छु ।
शिक्षण क्षेत्रमा तपाइँले कति वर्ष बिताउनुभयो ? अहिले त तपाइँ ६० वर्ष पुग्नुभयो ?
मैले ३२ वर्षभन्दा बढी शिक्षण क्षेत्रमा बिताएँ । मैले औपचारिक वा भनौं स्थायी शिक्षकै भएर २७ वर्ष काम गरेको छु । अस्थायी रुपमा मैले ४ वर्ष काम गरेँ । त्योभन्दा अगाडि पनि म शिक्षण क्षेत्रमा लागेको थिएँ । बीचबीचमा विभिन्न कारणले गर्दा अवरुद्ध भयो, कहिले जेलमा परेँ, कहिले अण्डरग्राउण्ड हुन बाध्य भएँ, त्यसले गर्दा बीचमा टुटफुट भएको छ । टुटफुट नहुँदो हो त ३५ वर्ष नाघ्थ्यो, पुगनपुग ४० वर्ष पुग्थ्यो ।
मैले शिक्षण सुरुवात २०३७ सालबाट गरेको हुँ । त्यो बेला मैले बिहानी मावि(अहिलेको आदर्श आजद मावि÷कलेज) मा पढाएँ । त्यसपछि मैले नालाको चण्डेश्वरी माविमा पढाएँ । त्यहाँ पढाउँदा ३७० रुपियाँ महिनाको पाउँथे । म निमावि अस्थायी शिक्षक थिएँ । त्यहाँबाट म नुवाकोटमा काम गर्न गएँ । नुवाकोटको चुटराले भन्ने ठाउँको प्रस्तावित माविमा पढाएको थिएँ । त्यसपछि नुवाकोटकै विकट ठाउँ खैरेनीटारको अमरज्योति माविमा पढाएँ ।
त्यो बेला डिग्रीका सबै प्रक्रिया सकाएर पनि थेसिस बाँकी भएर ठाउँठाउँबाट मैले छोड्दै फेरि काठमाडौं आएँ र फेरि म थेसिस गर्नतिर लागेँ । त्यही क्रममा विद्यार्थी आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन भइरहेको थियो । नुवाकोटको शिक्षक आन्दोलनमा पनि सहभागी भएँ । त्यहाँबाट छुट्टिएपछि काठमाडौं आएँ, त्यो बेला विद्यार्थी आन्दोलन भइरहेको थियो । त्यो २०४२ सालको कुरा हो । त्यो बेलामा पनि म जेलमा परेँ र शैक्षिक यात्रामा अवरुद्ध भयो । त्यसपछि भक्तपरमै आएँ । त्यसपछि वागीश्वरीमा पढाएँ, आदर्श आजदमामा पढाएँ, शारदामा पढाएँ, आदर्श लायकूमा पढाएँ, त्यसरी मेरो शिक्षण पेशा विभिन्न विद्यालयमा बित्यो ।
शिक्षकदेखि प्रअसम्मको पद सम्हाल्नुभयो, त्यो क्रममा शिक्षक हुनु र प्रअहुनुबीचको पृथकता के पाउनुभयो ?
शिक्षक हुँदा आफ्नो विषय र कक्षामा मात्र सीमित भए पुग्थ्यो तर प्रिन्सिपल भएपछि त्यतिले मात्र नपुग्दो रहेछ । विषयको साथसाथै प्रशासनिक काम पनि गर्नुपर्ने र विभिन्न तप्काका मान्छेहरुसँग, संस्थाका मान्छेहरुसँग डिल गर्नुपर्ने, अनि शिक्षकहरुलाई जिम्मेवारीहरु दिँदै, आफूले पनि कर्तव्य निभाउँदै र समयभन्दा बढी नै स्कुलमा बिताउनुपर्ने, शिक्षक भएको बेलाजस्तै घुमफिर गर्न नपाउने हुँदो रहेछ ।
३१ वर्षको शिक्षण भक्तपुरमै बढी बिताउनुभयो कि बाहिर ?
बढी समय मैले भक्तपुरमै बिताएँ, त्यो भनेको मैले आदर्श आजादमा बिताएँ, त्यहाँ १९ वर्ष काम गरेँ । त्यहाँ डेढ वर्षजति प्रअ भएँ । त्यहाँबाट म शारदामा प्रअ नै भएर आएँ र त्यहाँ करिब ११ वर्ष काम गरेँ । त्यसपछि लायकू थिमीको आदर्श माविमा १५ महिना केही दिन काम गरेँ र रिटायर्ड भएँ ।
लामो समय भक्तपुरमा बिताउनुभएको अनुभवबाट त्यो बेलाको शिक्षा र अहिलेको शिक्षाबीच तुलना गर्दा भक्तपुरको शिक्षा कतातिर गइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
पहिलाको शिक्षा घोकन्ते त घोकन्ते नै थियो, तर एकदमै ज्ञावर्धक थियो । नैतिक कुरा धेरै हुन्थे पहिला । शिक्षकहरुलाई विद्यार्थीहरु आदर गर्ने, मान गर्थे । विद्यार्थीहरु अनुशासित थिए । विद्यार्थी आजकालका जस्ता छाडा, उच्छृङ्खल थिएनन् । आजकाल विद्यार्थीहरुले जुन शिक्षा ग्रहण गरिरहेको छ, तर पहिलाजस्तो नैतिक रुपमा सेचत छैनन्, त्यसको अभाव मैले पाएको छु । पहिलोजस्तो कठीन प।िम गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले छैन । हाम्रो पालामा हामी पढ्दा माध्यमिक तहमै आठ नौवटा अँग्रेजीका कितावहरु पढ्नुपथ्र्यो, अहिले एउटा कक्षामा एउटा अँग्रेजी पढे पुग्छ त्यतिखेर हामीले ती कितावहरुबाट धेरै नैतिक र नागरिक शिक्षा, अनुशासनका कुराहरु, राष्ट्रियताका कुराहरु, देशप्रेमका कुराहरु सिक्थ्यौं । साथीभाइहरु प्नि त्यस्तै खालका थिए तर आजकाल चैं मैले विद्यार्थीहरुमा व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी सोच पलाएको मैले पाएको छु । पहिला पठनपाठनका साथसाथै सामुहिक भावनाका विद्यार्थी थिए, आजकाल भने कम छ । आजकाल व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्लिप्त हुने खालका, पूँजीवादी शिक्षाको प्रभावमा परेको देखेको छुु ।
प्रअ हुनुभएको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा हाम्रो सामुदायिक शिक्षा ¥हासोन्मुख भएको, विद्यार्थी सख्या कम हुनुका कारण के देख्नुभयो ?
सार्वजनिक शिक्षा तपाइँले भन्नुभएजस्तो हुनुमा शिक्षक त जिम्मेवार छ नै । किनभने उसले कक्षाकोठामा जेजति गर्नुपर्ने थियो, सायउद् त्यसमा पनि कमी भएको हुनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा तालिमप्राप्त शिक्षक बढी छन् । तलब पनि उनीहरुले रामै्र पाएको अवस्था छ तर यति भैकन पनि राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा जति हेर्नुपर्ने थियो, हेरिरहेको जस्तो लाग्दैन । विनिहरु हुन्छन्, स्रोतव्यक्तिहरु, शिक्षाप्रति जिम्मेवार सरोकारवालाहरु छन्, तिनीहरु त खाली तलब खुवाउने निकायजस्तै भएका छन् । विद्यालय कुन रुपमा चलिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ कि छैन ? तालिम प्राप्त शिक्षकहरुले तालिमअनुसार अगि बढिरहेका छन् कि छैन ? कक्षामा त्यो प्रयोग भएको छ कि छैन ? त्यो फिडव्याक दिने, कक्षा निरीक्षण गर्ने, त्यस्तो पटक्कै भएको पाइँदैन । त्यसले गर्दा राज्य त खाली तलब दिने निकायजस्तै मात्र हुन गएको छ । र, बजेट पनि झन् झन् घटाएको अवस्था छ । सत्रबाट १० प्रतिशतमा आएको छ । त्यो सत्र प्रतिशत हुँदा पनि र अहिले १० प्रतिशत हुँदा पनि त्यसको अधिकांश बजेट तलबमा गएको छ । शिक्षा निकायका कर्मचारीहरु भ्रमणमै लाग्ने गरेका छन् । शिक्षाको विकासमा भन्दा प्रशासनिक कुरामा बढी खर्च गरिरहेका छन् । शिक्षकलाई तलबमात्र दिएर, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने, शिक्षाप्रति बदलिएको अपेक्षा पूरा गर्न सरकार लागेको पाइँदैन । यस्ता कुराहरुमा बोर्डिङ सजग छ । त्यस्ता स्कुलहरु आफ्नो लगानी उठाउनका लागि पनि ध्यान दिएको छ । त्यसले गर्दा उनीहरुप्रति नै अभिभाकव आर्कर्षित भएका छन् ।
राज्यकै सिकारमा हाम्रा सरकारी स्कुल पर्यो भन्नुभएको हो ?
हो, एकदमै, राज्यकै गलत नीतिको सिकारमा सरकारी स्कुल परेका छन् । म ठाउँठाउँका निजी विद्यालयको अवलोकनमा पनि पुगेको छु । उनीहरुले असाध्यै राम्रो वातावरणमा पढाइरहेका छन् । त्यस्तो वातावरण हामीकहाँ सिर्जना गर्नै सकेन । तलबले मात्र त्यो वातावरण नहुने रहेछ । त्यो कुरा राज्यले नै बनाउनुपर्ने रहेछ । त्यसको निम्ति विद्यालय विद्यालय चहार्नुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षकहरुले आफ्ना सन्तान सरकारीमा राखेन भन्ने सवाल पनि छ नि ?
त्यसमा म फरक कुरा राख्छु । सरकारी स्कुलमा त पढाए पनि तलब आउँछ, नपढाए पनि तलब आउँछ भन्ने सोच विकास भएको छ । विद्यार्थी भए पनि तलब आएकै छ, नभए पनि तलब आएकै छ किन टाउको दुखाइ भन्ने सोचले पनि अभिभावकहरु आर्कर्षित छैनन् । शिक्षित अभिभावकहरु, हुने खाने अभिभावकहरु सामुदायिक विद्यालयको गेटबाटै भित्र छिर्दैन ।
सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरुले तलब सरकारबाटै खाने भएकाले त्यो भनेको हो । अब सरकारी क्षेत्रबाट तलब खाने त शिक्षकमात्रै होइनन्, थु्रप्रै क्षेत्रका मानिसहरु छन् । शिक्षा कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग, सैनिक, पुलिस, कर्मचारी सबैले सरकारी तलब खान्छन् । के तिनीहरुले चाहिँ सरकारीमा पढाउन नपर्ने, शिक्षकले मात्र पर्ने ? यदि सरकारको तलब खाने, माना खाने सबैले आफ्ना सन्तान सरकारीमा राखेको भए सरकारी स्कुलमा ध्यान जान्थ्यो । अनि बँधय भएर तिनीहरुले सरकारीलाई राम्रो बनाउन कोसिस गथ्र्यो । त्यसकारणले पनि राज्यका ढुकुटीबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने सबैले सरकारीमै पढाउनुपर्छ । अनि मात्रै सरकारी स्कूल ठीक हुन्छ । निजि स्कुलमा पढाएका कति अभिभावक, कति सरकारी कर्मचारीहरुमा काम गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ नि भन्ने पूँजीवादी सोच छ, त्यसकारण हुने खानेका छोराछोरी र हुँदा खानेका छोराछोरी पढ्ने खालको दुई खाले शिक्षाको विकास राज्यले नै गरेको हो । मलाई लाग्छ, २०५२ सालदेखि सरकारी विद्यालय खुलेका छैनन्, त्यति अवधिका हजारौं निजी स्कूल च्याउजस्तै उम्उिका छन् । त्यसरी उम्रिनुका कारण सरकारी स्कुल बेवास्तामा परेका हुन् । राज्य शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिदै गएको तथ्य त्यहाँबाट पनि देखिन्छ ।
तपाइँसँग शिक्षण र प्रशासन दुबैको अनुभव छ, आदर्श आजाद, शारदा, आदर्श लायकूमा नेतृत्व गर्दाताकाका थुपै्र काम, योजनामध्ये कुन चाहिँ बढी तपाइँलाई सम्झना आउँछ ?
म जहाँजहाँ गएँ, त्यहाँ त्यहाँ विवाद थियो । ती विद्यालयहरुमा विवाद समाधान गरेकोमा म सन्तुष्ट छु । शिक्षकहरुको बीचमा मनोमालिन्य, धारणामा मनोमालिन्य, द्वन्द्वकालीन अवस्थामा म शारदा र लायमूमा पुगेको थिएँ । मैले त्यो द्वन्द्वलाई साथीहरुको सहयोगले समाधान गरेँ । जहाँजहाँ पुगेँ, त्यहाँ भौतिक निर्माणका कुराहरुमा जोड दिएँ । विद्यार्थीहरुको शौचालयदेखि लिएर तिनीहरुको पठनपाठन गर्ने कोठाहरुदेखि लिएर, ल्याबसम्मको भौतिक सुविधा दिने काममा खटेँ । जति मैले जति शैक्षिक क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यति दिन नसकेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । तर द्वन्द्व समाधान गर्न भने म सफल भएको छु । आजकाल राम्रो अंक ल्याउने विद्यालय मात्र राम्रो विद्यालय गनिने समय छ, तर म कहिल्यै पनि त्यसमा मात्र सीमित हुन चाहिँन । विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि उत्तिक्कै अब्बल हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले काम गरेँजस्तो लाग्छ ।
विवादित स्कुलमै तपाइँको नेतृत्व किन, कसरी समाधान गर्नुभयो ?
म आर्दशबाट शारदामा जाँदा पनि प्रअ को हुने ? भन्ने सवाल थियो । नेतृत्व कसले बहन गर्ने भन्ने प्रश्न थियो । त्यहाँ विद्यार्थी कम भइरहेको अवस्था भए पनि तलबको साथसाथै अरु भत्ता, सुविधा लिइरहेको मैले पाएँ । थप काम गरेको भन्दै, अथवा पुरानो शिक्षक भएको नाताले घाटा बजेट हुँदा पनि त्यसरी खाइरहेको कुरा मलाई चित्त बुझेन । विद्यालयको एउटा शौचालय, खानेपानीको ट्यांकी बनाउन नसकेको बेलामा, खेल्ने कुनै सामग्ी र चौरहरु नभएको अवस्थामा मैल शिक्षकहरुलाई खाली सेवा र सुविधामा मात्र जोड दिनुहुदैन र विद्यार्थीको निम्ति पनि, अतिरिक्त क्रियाकलापको निम्ति पनि, खेलकुदको निम्ति पनि, पुस्तकालयको निम्ति पनि, पठनपाठनबाहेक उनीहरुको सर्वाङ्गीण विकास गर्न चाहिने कुराहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, बजेट बनाउनुपर्छ भनेर मैले भनेँ । तर शिक्षककहरु ऋाफ्नो थप आम्दानीको स्रोतको रुपमा विद्यार्थीलाई लिइरहेका रहेछन् । त्यो कुरा चित्त नबुझेपछि मैले हिसाब पारदर्शीको कुरा उठाएँ । यो स्थितिले विद्यालय बन्दैन, विद्यालय कोल्याप्स हुन्छ भनेर भनेँ । त्यसकारणले अब विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौं भन्ने सोच राखेँ तर कतिपयलाई पचेन र विवाद भयो । मैले त्यो सुविधा कटौती गरेँ । विवाद भयो । विस्तारै साथीहरुले बुझे । अहिले टीम बनेको छ ।
यसैगरी आर्दश लायकूको कुरा पनि बेग्लै छ । त्यहाँ पनि पदीय विवाद थियो । को सिनियर भन्ने विषयमा प्रअ बन्न नसकेको अवस्थामा म त्यहाँ सरुवा भएर गएँ । पुरानो प्रअले रिटायर्ड हुनुभन्दा अगाडि धेरै दिनअघि कोहीलाई पनि प्रअको जिम्मेवारी नदिई उहाँ हिँड्नुभयो । त्यहाँको खाता बन्द भयो, शिक्षकहरुले तलबै खान पाएनन् । त्यो अवस्थामा शिक्षा कार्यालयले कुनै परीक्षा केन्द्र नै राख्न चाहेन । विश्वास गरेन । सामुहिक परीक्षा समितिले समेत केन्द्र दिएन । शिक्षकबीच एकदमै अन्योलको अवस्था थियो । त्यतिखेर साथीहरुको सरसल्लाह अनि त्यही स्कुलका साथीहरुको अनुरोधमा म सो स्कुलमा सरुवा भएँ । त्यो काममा बढी भूमिका नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघले खेल्यो । संघले जिल्लाकै राम्रा्, ऐतिहासिक विद्यालय विवादमा मुछिनु हुन्न भनेर मलाई प्रअ बन्नुपर्छ भने, समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेपछि म त्यहाँ गएँ । त्यहाँ मलाई सुरुवातमा केही समस्या आयो, घेरामा परेँ म । विद्यालय बन्द गर्न आए । त्यो सबै हुँदा हुँदै पनि शिक्षकहरुमा विद्यालय चलाउनुपर्छ भन्ने भावना पाएँ । त्यो भावनालाई सँगालेर मैले बाहिरी दबाबलाई पन्छाएँ । बाहिरी कुरा बाहिरै मिलाउनुहोला भनेर भनेँ । मैले त्यो बेला भनेँ, म विद्यालय बन्द गर्न आएको होइन, बन्द विद्यालयलाई खुलाउन आएको हँु, यहाँ तपाइँको काम छैन, तपाइँहरु जिशिका जानुहोला, सिडिओकोमा जानुहोला । त्यो बेला केही जर्बजस्ती गर्न त खोजे तर मैले त्यो गर्न दिइँन । उतै पठाएँ । अनि शिक्षक साथीहरुलाई बाहिरको प्रभावका नपर्नु होला, दशबजे अगाडि, चारबजे पछाडि तपाइँहरु अरु कुराहरु गर्नुहोला र स्कुलभित्र बाहिरका कुरा नछिराउँ र यहाँचाहिँ हाम्रो विशुद्ध शैक्षिक काम गरौं, पूरा कक्षा लिउँ भनेर भने । तपाइँहरुमा कुनै शैक्षिक समस्या आउन दिन्न भनेँ । अहिले सुरक्षित अवतरण गरिकन म फर्कन पाएँ, टीम मिलाएर । त्यही आनन्दको कुरा हो ।